बिल्ली काटनबाट स्नोट कसरी उपचार गर्ने?
पिटिनबाट स्नोट कसरी उपचार गर्ने?
एक झण्डा ठंड एक संक्रामक रोग हो। यो नाक गुहा, माथिल्लो श्वसन पथ, मुख गुहा र संयोजनविषाणुहरु को सूजन द्वारा उत्पन्न हुन सक्छ। पिटिनबाट स्नोट कसरी व्यवहार गर्ने, रोगको कारण स्थापना पछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। आवश्यक ठेगाना गर्न पशुचिकित्सा को लागि, रोगले बिल्ली का बच्चाको मृत्यु हुन सक्छ।
इन्सुलेशनले दुई भाइरसहरूको कारणले गर्दा: हेपेस र क्यालिसेविओरोस , साथै विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरिया र माइक्रोबक्स। हर्ब्स पर्यावरणीय कारकहरूको लागि धेरै प्रतिरोधी छैन। यसको उच्च तापमान र एंटीवायरल ड्रग्स नष्ट गर्दछ, र कलिस्विरिअस दबाइहरु लाई अधिक प्रतिरोधी र कम उत्तरदायी बनाइन्छ।
यदि बिल्ली काटन स्नोट बहदैछ भने, त्यसपछि सबै भन्दा पहिला यो लक्षणहरु लाई कम गर्न र भाइरस देखि लडने को लागि शरीर को मदद को आवश्यक छ। यस उद्देश्यका लागि, एन्टीबायोटिक्स र विटामिनहरू प्रशासित छन्। उपचारको एक महत्त्वपूर्ण तत्व नाक र आँखाबाट स्रावको हटाउने हो। एक कपास स्वाबाको साथ धुनुमा न्यानो पानीमा डुबाइरहेको छ, अशुद्ध आँखाले बिरालोको नजर राख्न मद्दत गर्नेछ। नाकको लागि, नुनको नरम प्रयोग गरिन्छ। बिरालो शान्त र शान्त स्थानमा उच्च नमीको साथ राखिएको हुनुपर्छ, उदाहरणका लागि, बाथरूममा, जसले निर्जलीकरण कम गर्नेछ र सास फेर्न सुविधा दिन्छ। बिल्ली का बच्चा एक स्नोट छ भने के गर्न, पशु पशु चिकित्सक सबै भन्दा राम्रो बताउनेछ। केवल एक विशेषज्ञले प्रभावकारी औषधिहरू निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ, जसको बीचमा निम्न औषधि हुन सक्छ:
प्रतिरक्षा बलियो बनाउनेछ;
श्वसन मार्ग मा सतावट सघन।
आँखाका लागि बिरुवाहरू।
बीमार बिल्ली को बच्चाहरु को गंध को कमजोरी छ, र यसलाई बलियो खुशबू संग खाना संग प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यदि अल्सर मुखमा बनाइन्छ भने खाना अर्ध तरल हुनुपर्छ। यदि बिल्ली का बच्चा पुरा तरिकाले खाने देखि इनकार गर्छन, खाना पोषक तत्व को परिचय को द्वारा जनावर को रगत मा प्रदान गरिन्छ।
बिरालोहरु को लागि आफ्नो हातहरु संग खेल परिसर
जलीय कछुआ घर मा के खाने?
कसरि एक undulating तोते को खाने को लागि?
किन बिरालो तिम्रो टाउको मा निदियो?
कुकुरलाई आदेश कसरी सिकाउने "एक पाना दिनुहोस्"?
केटाहरुका लागि कुकुरहरू
कपालहरूमा क्यान्सर परिवर्तन हुन्छ?
एक मछलीघर को लागि एक स्नैग तयार कसरि?
घरको लागि कुकुरहरू
पर्खालमा बिरालोहरूको लागि अलमारियाँ
भर्गा तोते कसरी बनाउने?
जम्मला मा त्योहार
Rassolnik बहुव्यापी मा
भरने वाला क्रिसेंट्स
केसँग बैंगनी कपडा लगाउने?
हनीको पोषण मूल्य
Fanganui राष्ट्रीय उद्यान
कतिपय जूताहरू लैजानुहुन्छ?
फुटबल खेलाडीका पत्नी
दही मा गोभी पान्केक
रबर्ट पान्टिन्सन र टेलिया बर्नाट
गाढा नीलो कोट
गर्भावस्थाको बेला पोलिसमा दुख्छ
एक पोषणवादी Svetlana फोसबाट मेनु
बेडको साथमा बस्ने कोठाको लागि मोडुलर सोफे
नेटली कोले - एक जाजमैन नाथ किंग कोल को बेटी
सिर्विसिस - लक्षण
Neretin को घोंघे - राख्न र प्रजनन को रहस्य